Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Flightsgbọ elu London Heathrow si Calgary na WestJet ugbu a
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Flightsgbọ elu London Heathrow si Calgary na WestJet ugbu a.
Ụzọ ọhụrụ WestJet iji mee ka mgbake akụ na ụba Alberta dịkwuo ngwa ma na-akpali mmasị itinye ego na njikọ zuru ụwa ọnụ na Heathrow nke London.
Ụzọ ọhụrụ nke WestJet na-adịghị akwụsị akwụsị site na YYC gaa London Heathrow, ọdụ ụgbọ elu nke Europe, na-anabata ndị na-achọ ịnweta ụlọ ọrụ ego na azụmahịa nke ụwa na ndị na-achọsi ike maka njikọ kpọmkwem iji nyochaa omenala na akara ngosi London.
Heathrow bụ ebe dị mkpa maka azụmahịa na ndị njem ntụrụndụ na ọ ga-abara ndị na-etinye ego na ndị njem nlegharị anya uru dị ukwuu.
Ịnweta ikuku bụ isi ihe na mgbake akụ na ụba Alberta na uto nke ụlọ ọrụ njem nlegharị anya.
WestJet taa kwuputara na ọ ga-agbakwunye ọrụ anaghị akwụsị na London Ọdụ ụgbọ elu Heathrow (LHR) malite na mmalite oge opupu ihe ubi 2022. Ka WestJet na-aga n'ihu na-abawanye njikọ zuru ụwa ọnụ site na Western Canada, mgbakwunye nke ọrụ na-adịghị akwụsị akwụsị n'etiti Calgary na London-Heathrow na-egosi ntụkwasị obi na mgbake nke azụmahịa na njem ntụrụndụ n'etiti ebe abụọ ahụ.
John Weatherill kwuru, "Dịka ụgbọ elu nwere ụgbọ elu kacha si Alberta, nke a bụ ihe mgbake dị mkpa ka anyị na-emepe njikọ ọhụrụ n'etiti Canada na otu n'ime ọdụ ụgbọ elu ụwa na-achọsi ike." WestJet Onye isi ọrụ azụmahịa. "Anyị na-aga n'ihu na-ewusi netwọkụ anyị ike, na-enye ọtụtụ nhọrọ maka azụmahịa na ndị njem ntụrụndụ na ntinye ego ndị a ga-eme ka mgbake ụlọ ọrụ anyị dị ngwa ma na-ahụ na Western Canada na-ewuli azụ site na ọrịa na-efe efe jikọtara karịa mgbe ọ bụla."
Ka ntụkwasị obi na azụmahịa na njem ntụrụndụ na-aga n'ihu na-abawanye. WestJetỤzọ kachasị ọhụrụ ga-arụ ọrụ n'oge opupu ihe ubi a na ụgbọ elu 787 Dreamliner. Ọrụ WestJet's 787 na-egosipụta ụlọ ọrụ azụmahịa nke ụgbọ elu gụnyere pọọdụ ụgha, iri nri n'ọchịchọ yana nhọrọ dị elu nke Premium na Economy Cabin.
Weatherill gara n'ihu ikwu, "Anyị na-agba mbọ ịgbasa ebe anyị zuru ụwa ọnụ na Calgary na ịkwado mgbake nke ọtụtụ ngalaba na-adabere na njem na njem nlegharị anya." "Dịka ụgbọ elu nke nwere ebe Europe na-adịghị akwụsị akwụsị site na YYC, anyị na-atụ anya ka ndị ọbịa na-erite uru na nhọrọ ndị ọzọ yana ịba ụba maka njem n'etiti Canada na UK."
Na mgbakwunye nke Heathrow na netwọk WestJet n'oge opupu ihe ubi a, WestJet ga-ejikọta Calgary na ebe 77 na-adịghị akwụsị akwụsị n'ime afọ. WestJet ga-aga n'ihu na-enye ụgbọ elu anaghị akwụsị n'etiti Calgary, Vancouver, Toronto na Halifax gaa London, Gatwick.
Nkọwa netwọk agbakwunyere maka njem n'etiti Calgary na London-Heathrow gụnyere ugboro ole, oge na ọnụahịa mmeghe ga-adị, na ọrịre, n'izu ndị na-abịa.